Home News Nin soomaali ah oo lagu xiray dalka Talyaaniga (Ogoow sababta)
Nin soomaali ah oo lagu xiray dalka Talyaaniga (Ogoow sababta)
Booliska Dalka Talyaaniha ayaa Xabsiga dhigay Nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cumar Mooshin Ibraahim oo lagu eedeeyay in uu xiriir la leeyahay Daacish.
Cumar oo ka shaqeynayay sharikad dhinaca Nadaafadda ah oo ka howlgasha Magaalada Bari ee dalka Talyaaniga ayaa la xiray kaddib markii uu sheegay in Xarunta Vatikanka ee Roma ay mudan tahay in la qarxiyo .
Isaga oo u sheekeynayay qaar ka mid ah shaqaalaha Sharikadda ayuu sheegay in dhamaan Kaniisadaha ku yaalla Talyaaniga ay ku fiicanyihiin in la qarxiyo,sida ay sheegeen Booliska.
Waxaa kale oo uu bogaadiyay weerar dhawaan ka dhacay Magaalada Paris oo ay ku dhinteen 5 Qof kaas oo ay Daacish sheegatay.
Nin Hubeysan ayaa weerar ku qaaday Xarun laga dukaameysanayay oo ku taalla bartamaha Paris halka uu 11 kale ku dhaawacay,waxaana weerarkaa sheegtay Daacish.
Booliska Talyaaniga ayaa sheegay in dhaq dhaqaaqa Cumar ay daba socdeen labadii bilood ee la soo dhaafay isaga oo dalka Talyaaniga galay sanadkii 2016kii.
Booliska ayaa kordhiyay joogitaankooda Xarumaha Kaniisadaha ee Roma iyo Vatikaanka maalmaha lagu jiro Kirismiska,iyaga oo sidoo kale nidaamiyay dadka badan ee booqanaya.
Previous articleKenya oo la filaayo in ay maanta ka jawaabto dacwada badda Soomaaliya
Next articleC/wali gaas oo si cad u sheegay in uu yahay Musharax
Al-shabaab:-Waxaan fulinay Weeraro iyo qaraxyo kala duwan oo aan la beegsanay...
R/wasaaraha Itoobiya oo sheegay in Calanka wadankiisa la Bedeli Karaayo!!